Noti: Ita nezviyeuchidzo, mahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Pese patinotanga gore, isu tinoedza kuita huwandu hukuru hwezvivimbiso, imwe kana imwe chete yatinowanzo chengeta, kungave nekuti tinokanganwa kana kungozeza. Kuti tirege kukanganwa zvimwe zvezvipikirwa izvi, tinogona kushandisa zvinoshandiswa zvinotiyeuchidza zuva rega rega nezvekuzvipira kwatakaedza kuwana. MuApp Store mune huwandu hukuru hwezvishandiso zviripo izvi, vamwe vakabhadharwa uye vamwe nekutenga-mukati-app. Nhasi tiri kutaura nezve Cherechedzo: Ita ne Zviyeuchidzo kunyorera, imwe yeanobhadharwa kunyorera, ayo kwenguva yakati rebei yatinogona kurodha mahara kuburikidza neiyi link yandinosiya panopera chinyorwa
Noti: Ita nezviyeuchidzo, chishandiso chiri nyore kwazvo chauinacho. mutengo wenguva dzose muApp Store ye1,99 euros, asi sekukuzivisa kwandakaita iwe, parizvino inogona kutorwa pasi mahara. Cherechedzo inotibvumidza isu kugadzira runyorwa rweakamirira mabasa ekuita, mabasa atinogadzira muchimiro cherondedzero uye kuti isu tinokwanisa kubvisa / kuyambuka tichienda nezvazvo. Ichi chishandiso chakanakira chinangwa chandakadoma pakutanga kwechinyorwa, kugadzira zvinyorwa zvekutenga, kugadzirira zvese zvatinofanira kutora parwendo….
Ichi chishandiso chinomira kubva kune yakawanda ruzhinji iyo inowanikwa muApp Store nekuti inotipa widget yenzvimbo yekuzivisa iyo inotibvumidza isu kuwedzera, kugadzirisa kana kupedzisa mabasa yakamirira, chimwe chinhu chinoitwa nevashoma. Iyo inowiriranawo neIOS mabasa, ine chiratidzo chinoratidza isu huwandu hweakamirira mabasa, inotipa isu matanhatu mavara ekugadzirisa iko kunyorera uye inowirirana neIpad yedu kuburikidza neDropbox (hapana iCloud panguva ino), iyo inogona kunge iri dambudziko yevashandisi vasina account pane ino yekuchengetedza sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Noti: Ita nezviyeuchidzo, mahara kwenguva yakati rebei
Izvi kana iri yega ad-ripoti "imwe yeakabhadharwa mafomu, ayo kwenguva yakati wandei yatinogona kurodha mahara" hapana chimwe kunze kwekunyepedzera kwekunyepedzera, ZVESE zvainoita kugadzira CHIMWE runyorwa mune yechizvarwa IOS zviyeuchidzo app.